Ganacsiga Blogging = Helitaan | Martech Zone
Ganacsiga Blogging = Helitaan
Isniin, Oktoobar 16, 2006 Sabti, Febraayo 25, 2017 Douglas Karr
Fadlan ka qaado hal saac wiigaaga oo ka daawo fiidyowgaan Dave Taylor.
Waa soo koobid fantastik ah oo ku saabsan sababta wax loo qoro, sababta loola macaamilayo meheraddaada, faa'iidooyinka baloog garaynta iyo hagaajinta mashiinka raadinta, faa iidooyinka faallooyinka ku jira bartaada sida isticmaalaha loo soo saaray… si fudud waa macluumaad fara badan oo ku jira soo bandhigid weyn.
Tags: shir madaxeedkabloghubkaabaloog loogu talagalay seohubinta ganacsigablogging shirkadahadave taylorhadalka
Evolution of Shabakad Bulsheed - Shabakada Fan Fan
Isbeddellada Weyn ee Raadinta Google ee la qeexay
Oktoobar 16, 2006 at 1:07 AM
Waad ku mahadsantahay iskuxirka, Douglas. Inbadan ayaa la mahadiyey.
Oh, iyo haddii aad la yaabban tahay, cududdaydu dhammaantood way fiicantahay hadda, mahadsanid, iyo shakaalka ayaa ku soo laabtay kabadhada daawada!
Oktoobar 16, 2006 at 1:43 AM
Aad baad u soo dhaweyneysaa, Dave. Oo waxaan ku arkay qoraal ku yaal bartaada gacanta oo si fiican u socota! Waan ku faraxsanahay inaan maqlo !!!